Taariikhda My Butros » 5 Waxyaabaha u Wingwoman ah in Xusuusnow
5 Waxyaabaha u Wingwoman ah in Xusuusnow
Last updated: Nov. 22 2020 | 3 min akhri
In wingwoman waa shaqo muhiim ah! Waxaad si loo hubiyo in aad kor u dhiso kalsoonida iyo soo gaaray xabbadood oo dhan ka mid ah go. Laakiin taasi waxa weeye waxa saaxiib waxaa loogu talagalay, waxaana rajeynayaa ay isku haddii samayn lahaa iyo markii kabaha waa on foot kale. Waxaan wada saaray talooyin laakiin waxaan qabaa wingwoman kasta oo ku kacaya iyada cusbo ogyahay waxaa jira zillion a more. In hab Waxaan qabaa wingwoman kasta waa ogyahay in aan had iyo jeer barashada shaqada – oo xataa la bixiyo!
Your saaxiib la doonayo in uu la kulmo qaar ka mid ah dadka laga cabsado jidka. Nasiib darro taasi waa nolosha. Laakiin inta aad wax ku saabsan oo aan samayn karaa in aad u baahan doontaa inaad waxaa jiri in ay crack furan Ben ah & Jerry ka dib waxa kaliya oo waxaa jiri iyaga u. Hubi in ay u ogaadaan in ay wax qalad ah sameeyey iyo inay la kulmi doonaa qof habboon iyaga mustaqbalka. Sida iska cad haddii ay ayaa sheegay in wax badan oo aan naxariis lahayn ee fasax-up ay u badan tahay waxaad yeelan doontaa in ay dhex maraan qaar ka mid ah, kuwaas oo si faahfaahsan ama si fudud u ku dhagaysan. Maxaa yeelay, iyagu soo yeeli waxay u baahan doontaa si aad u hesho in ka mid ah nidaamka. Oh iyo hubaal noqon xun oo ku saabsan hore u!
Hubi Waxay tahay Safe
Waxaan xasuustaa mar maqalka koox ka mid ah asxaabta ka hadalka iyo maqalka hal gabar oo hadalka ku saabsan guriga la nin in ay ahayd waxoogaa creepy habeen ka hor. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, waxay ahayd hagaagi laakiin xoogaa si aad u hesho gurigiisana ha ka eryo maalintii dambe ayay ku dhibtooday. My falcelin deg dega ahaa sababta sameeyey mid ka mid ah ma tagaan, iyada oo leh hadii uu yara creepy haddii ay u malaynayeen in ay saaxiibadeed? Waxaan u malaynayaa waxaa laga yaabaa in xoogaa adag tahay sababtoo ah waa adag tahay in aad naftaada ha guriga nin ee haddii aadan lagu casuumay laakiin aan shaqsiyan aaminsanahay haddii aan ku fakaray in saaxiibkiisa ahaa guriga la gurguurta oo ah waan isku dayi lahaa inaan aan adkaa xataa haddii ay u maleeyeen waxaan ahaa waalan si aad u hesho iyo seexan on fadhiga! In ay ku guul darreysatay in waan hubaa in ay telefoonka iyaga ka dhigi lahaa si ay u arkaan haddii ay hagaagi ahaayeen. Sida iska cad ka cabsashadiisa waa laga yaabaa in aad u malaynayso in aad u iman doonaa guud ahaan ka badan-difaaca laakiin waxaan qabaa in mustaqbalka fog saaxiib ogaan doonaa inaad u qabanaynaa si ay u nabadgalaan. Oo waa fog ka khayr badan kale waxa dhici kara in aad saaxiib iyo waxa nasiib daro inta badan sameeya.
Lahaanshaha Essentials ilayska-By
Taas yara culus sameeyo qaybta hore. Haddaba gal alaabtii xiiso leh! wingwoman kasta waa og yahay inaad u baahan doontaa in aad sahayda ee suurto-gal, burush timo, shanlooyinka, iwm … ilayska-by. Sidaas haddii mid idin ka arko qof aad jeceshahay aad awoodo labada share kasta oo kale waxyaabaha kale ee laga yaabo in illowdeen si ay u eegto knockout ah iyo caddayn in qof gaar ah.
Ma dhahayo aad u baahan tahay inaad Oscar-istaahila ama wax kasta oo la mid ah. Anigu ma u dhaqmi karaa badhamada laakiin muddo ka dib waxaad ku baran doontaa in ay u dhaqmaan in aad xiisaynayso marka aad si gaar ah ma tahay. Arinta ku saabsan dadka marka ay jecel yihiin qof (Oo midkoodna kama naga mid ah ku hoyatay kartaa qof maxaa yeelay, waxaannu oo dhan halkaas!) waa in ay ka hadlaan iyaga oo ku saabsan si ka badan. Oo aadan u noqon xun xiiso walba waxay dhihi waqtiga oo dhan, laakiin inta badan waxa keliya ee aad u baahan tahay inaad ilko caddeeyo oo interject la erayo kale “Really?”, “Oh qabow.”, “Haa, sidaas taataabtay” oo waa in aad u wanaagsan. Waxay si xiiso hadalka ku saabsan qofka ay xitaa ma dareemi doonto waa.
Noqo Available Si hadal
Haddii aad ka shaqeeya ama wax kasta oo waqti in ay kala duwan. Laakiin haddii ay wax in aad samayn in had iyo jeer la sugi karin marka hore gelin saaxiibkaa haddii ay dhalna weyn in ay u baahan yihiin in ay ku hadlaan wax ku saabsan. Haddii ay u qabanaynaa si joogto ah oo aanad ka heli wax samayn karaa ama ay la mid ma samayn lahaa idiin ku soo laabtay laga yaabaa in aad u baahan tahay in dib looga fikiro, laakiin haddii aad leedahay saaxiibtinimo wanaagsan waxaa jiri iyaga u, fiiriyaana iyaga iyo idinkaba run ahaantii aan wax badan samayn kara sida wingwoman wanaagsan ama saaxiib.
Maxaa Man kasta ka fogaadaan in ay maalinta ugu horeysa ee
Sida loo ilaaliyo Xiriirka uu ku qanacsan yahay
5 Su'aalaha aad weydiin waxaa habboon in maalinta ugu horeysa ee
Sidee taariikhda uu shaqo la'aanta
Sidee Si Taariikhda – Old School Style